Tailandy: Fampielezan-kevitra amin’ny ‘Fidio ny Tsia’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2011 7:11 GMT
Hilahatra any amin'ny biraom-pifidianana ireo Tailande amin'ny herinandro ambony ary na dia mitarika aza ny mpanohitra amin'ny toerana sasany, mbola tsy azo antoka tanteraka aloha hoe iza amin'ireo vondrona no hahazo ny fandresena. Niavaka tamin'ny fomba fanao hatramin'izay, fa nahitana fahafahana misafidy ny tsia ny vato ho an'ny mpifidy.
Hetsika amina fampielezan-kevitra no nokarakaraina handrisihana ny mponina mba hifidy amin'ny andron'ny fifidianana, fa ‘Fidio ny Tsia’. Ny Vahoaka Miray hina ho amin'ny Demokrasia (People’s Alliance for Democracy – PAD) na ny Miakanjo Mavo (Yellow Shirts) izay nikarakara ny fihaonana maro nanohitra ny governemantan'i Thaksin Shinawatra an-taonany vitsy lasa izay no tena vondrona manohana ny ‘Fidio ny Tsia’. Mpiara-dia taloha tamin'ny Praiminisitra amin'izao fotoana i Abhisit Vejjajiva izy ireo, ary tena manohitra mafy an'i Yingluck Shinawatra, zandry vavy indrindra an'i Thaksin.
Manazava ny anto-pisian'ny PAD i Bangkok Pundit :
Maneho biby miakanjo sahala amin'ny mpanao politika ny sary peta-drindrin'ny ‘Fidio ny Tsia’ handresena lahatra ny mpifidy fa tsy ilaina ny mifidy satria ‘bibidia’ avokoa ireo isafidianana. Milaza ny dikan'ny sary peta-drindrin'ny fifidianana i Catherine:
Nolazain'ny manam-pahefa eo amin'ny fifidianana fa ara-dalàna ny sary peta-drindrina. Manoratra i I-nomad:
Mahita ‘Fidio ny Tsia ‘ miangona any avaratr'i Tailandy ny mpirakitr'isa Isaan :
Manoratra i Tony Hedges fa fandaniam-potoana ny mifidy ny ‘tsia’ :
Mahita i FACT – Freedom Against Censorship Thailand fa karazana endrika fanoherana ankolaka ny mifidy ny ‘tsia':
@itteong: RT @smithsensei: Zavatra tsara tokony hatao ny mifidy ny tsia? Mety hahalany ny kandida tsy tianao indrindra ny mifidy ny tsia.Aleo aza mifidy ny FARAN'IZAY RATSY INDRINDRA.
@bkkbrain: @_Willowtree_ actually, raha fireneko io, dia toy izany ihany koa no nataoko… tena manaratsy tanteraka amin'ny vahoaka ny fampielezan-kevitra rehetra amin'ny “fifidianana ny tsia”
Mampitandrina ny lehiben'ny fiadidiam-paritra sasany fa mety hisy fiantraikany amin'ny filaminan’ i Tailandy ara-politika ny 20 isan-jaton'ny ‘tsia’ satria mety hihevitra ny fahaverezan'ny fahatokisan'ny olona azy amin'ny maha-rafi-piadidian'ny firenena ny hery sasany.